कफी र चिया पिएपछि किन फ्रेश भइन्छ ? कफीका यी अपत्यारिला फाइदाबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ? – OnlinePahar
कफी र चिया पिएपछि किन फ्रेश भइन्छ ? कफीका यी अपत्यारिला फाइदाबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ?
२८ माघ २०७७, बुधबार २२:२५ Basanta Khanal	0 Comments
दैनिक एक कप ब्ल्याक कफीले हार्ट फेलको खतरा १२ प्रतिशतसम्म घटाउँछ । २१ हजार मानिसहरु भएको अनुसन्धानपछि यो आँकडा जारी गरिएको हो । अनुसन्धानका अनुसार कफीमा भएको एन्टिअक्सिडेन्टले शरीरमा हुने इन्फ्लेमेसन अथवा शरीर सुन्निने समस्या कम गर्छ, त्यसैले भविष्यमा हृदयघात हुने खतरा घट्ने गर्छ ।
अमेरिकन हार्ट असोसिएशन जर्नलमा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार अनुसन्धानमा समावेश कोलोराडो स्कूल अफ मेडिसिनका प्राध्यापक डेविड काओ भन्छन्, ‘धेरैजसो मानिसहरुले सोच्छन् कि कफी र क्याफिन मुटुका लागि खराब हुन्छन् किनभने यसले रक्तचाप बढाउँछ । तर नयाँ अनुसन्धानका अनुसार कफीले हृदयघात हुने खतरा घटाउँछ । यो खतरा घटाउनका लागि मानिसले आफूलाई धुम्रपानबाट टाढा राख्नुपर्छ ।’
अमेरिकी वैज्ञानिकले यो अनुसन्धानमा २१ हजार मानिसको डाटा जम्मा गरे । दैनिक ०,१,२ र ३ कप कफीपछि यसको असर हेरियो । अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीकी एक अनुसन्धाता भन्छिन्, ‘दैनिक ३ कप कफी पिउनुहुन्छ भने हार्ट पल्पिटेशनको खतरा १३ प्रतिशतसम्म कम हुन्छ ।’
← स्मरणशक्ति बढाउन खानैपर्ने ८ खाना
यी पाँच बानीका कारण समय अगावै लाग्छ बुढेसकाल, हुनुहोस् सावधान →
यसरी बढाउनुहोस रोग प्रतिरोधी क्षमता (स्वस्थ अनि खुसी हुनुहोस्)
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:४७ Basanta Khanal	0
२८ माघ २०७७, बुधबार २२:२८ Basanta Khanal	0
फेरि एक साता काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी (के खुल्ने के नखुल्ने )
२८ माघ २०७७, बुधबार १३:११ Basanta Khanal	0